Meizu MX6 na - enweta nde ndekọ 3,2 maka ndoputa ya | Gam akporosis
Meizu MX6 na-enweta nde ndekọ 3,2 n'otu ụbọchị maka ndoputa ya
Enwere ekwentị ndị si China bịa ha na-ewelite agụụ mmekọahụ n'etiti ha anyị nwere ike ịchọta Redmi Rịba ama 4 ma ọ bụ na Mi 5 nke Hugo Barra na-eweta ya na Mobile World Congress n'ihi nlebara anya na Xiaomi na-enweta ụwa niile. E nwere akara ọzọ na - achọta ọtụtụ ndị Fans na nke a bụ Meizu. Otu ụlọ ọrụ China nke na-amata otu esi achọta ebe ziri ezi iji jide agụụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-achọta na ngwaahịa ha ihe ha chọrọ kwa ụbọchị na-enweghị efu aka na ụkwụ iji nweta ya.
Meizu MX6, otu n’ime ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na nke ahụ adịlarị Ọchịchị kemgbe July 19, natara ihe karịrị nde nde 3 (nde 3,2 ka ọ bụrụ kpọmkwem) n'otu ụbọchị. Nke a gosipụtara site na ụlọ ọrụ China nwere onyonyo e bipụtara na netwọkụ mmekọrịta Weibo. Ugbu a, anyị nwere ike ịga n'ihu na-aghọta ka ụfọdụ ndị nrụpụta na-akpali agụụ mmekọahụ na mgbe ụfọdụ m ga-achọ ịma ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ha etinye ụkwụ ha na ahịa ọdịda anyanwụ, dịka Huawei mere mmeri.
A ghaghi iburu n'uche na onu ogugu a na-anọchite anya ọnụ ọgụgụ ndekọ maka ire ere Ọ pụtaghị na ndị niile na-edebanye aha na-emecha na-edebe ekwentị. Agbanyeghị na ọ na - enyere anyị aka ịmata ebe nlebara anya na akara ngosi China a na - akwalite ya ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama.
Ihe oyiyi ahụ ekesara ekpughe ụfọdụ data, dika ihe ngosi nke ihe kariri 400 weputara. Maka ndị nwere mmasị na ekwentị a, ndebanye aha ka ga-emeghe ma a ga-enye mmalite mbido na July 30.
Anyị na-ekwu maka ọnụ, Meizu MX6, nke wetara ya a 5,5 ″ 1080 ihuenyo, Helio X20 deca-core chip, Mali-T880 GPU, 4 GB nke RAM, 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, batrị 3.060 mAh na ụgwọ ngwa ngwa, igwefoto azụ 12 MP na 5 MP n'ihu igwefoto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Meizu » Meizu MX6 na-enweta nde ndekọ 3,2 n'otu ụbọchị maka ndoputa ya
Vidio vidio nke Xiaomi Redmi Pro na-akwado ihuenyo OLED, igwefoto abụọ na deca-core chip
Corning Gorilla Glass 5 mara ọkwa na mmachi mmebi ka mma ugboro abụọ